ဘုန်းဘုန်းအံ တရားဟောနေဒီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘုန်းဘုန်းအံ တရားဟောနေဒီ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jun 10, 2012 in Creative Writing | 20 comments
ဘုန်းဘုန်းအံက မန်းဂေဇက်က ရွာသူားတွေကို တရားရေအေး အမြိုက်ဆေးကို ပေးမှာဖြစ်ပါဒယ်။
ဘုန်းဘုန်း တရားကို နာလိုသူများ ဆက်နာကြပါ။
အကုသိုလ် အတုံးအခဲမှန်ရင် ဒီနေရာဂ လှည့်ပြန်ကြစေ ………………………. ။
အဟမ်း … အဟမ်း …
အဟွတ် … အဟွတ် …..
ဒီချောင်းကလည်း ဘာမှ မပြောရသေးဘူး။ ဆိုးနေပြန်ပြီ။
(ဒီဂျရော ငုံဆေးပြား စားလိုက်လို့ ချောင်းဆိုး ပျောက်သွားပီ။ ဒဂါဂျီး ခီများဟာ ကြော်ငြာပီးပီ။ ကျုပ်ကို ကြော်ငြာခ လာပေးဒေါ့။)
ကိုင်း … စလိုက်ကြလို့ ….
ဂနေ့ … ဘုန်းဘုန်းအံ ဟောကြားမဲ့ တရားဂဒေါ့ “ရန်ဂို ရန်ချင်း မတုံ့နှင်းနှင့်” ပဲ ဖြစ်ပါဒယ်။
တရားနာ လာကျဘာဂုန်ဒေါ အရပ်ကတို့ရေ …..
ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ ဘုရားရှင်က ခုလို ဟောကြားထားပါတယ် ….
ရန်ကို ရန်ချင်း တုံ့ပြန်သဖြင့်
ရန်တို့မည်သည် မည်သည့်အခါမှ မငြိမ်းကုန် …
ရန်ကို ရန်ချင်း မတုံ့မှသာလျှင်
ရန်တို့သည် ငြိမ်းကုန်၏ ….”
အဲ့ဒီလို ဟောကြားထားတာပါ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘုန်းဘုန်းအံ အကြောင်းလေးကို ဥပမထားလို့ ဟောချင်ပါဒယ်။
လူဒိုင်း … လူဒိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ ရန်သူ ဆိုတာတော့ ရှိမှာပါ။ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဘုရားရှင်တောင်မှ ရန်သူ ရှိပါတယ်။ ရန်သူဆိုတဲ့ နေရာမှာ တစ်ဖက်သတ် ရန်သူနဲ့ နှစ်ဖက်ရန်သူဆိုပြီး ရှိဒယ်။ တစ်ဖက်သတ် ရန်သူဆိုတာကဒေါ့ တစ်ဖက်သတ်ပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ – ကိုယ်က အမြင်မကြည်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိဒယ်။ အဲ့လူဂို မြင်ရဒါနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ အလိုလို ဘဝင်မကျဘူး ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒေါမနဿတွေ ပွားနေဒတ်မယ်ဆိုရင် အဲ့လူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ရန်သူလို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါဒယ်။ သို့ပေမယ့် အဲ့လူဂဒေါ့ ကိုယ့်အပေါ်မှာ ကိုယ့်လို စိတ်ထားမျိုး မရှိဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ဖတ်သက်ရန်သူ ဖြစ်သွားဒယ်။
နှစ်ဖက်ရန်သူဆိုဒါကဒေါ့ သူရော ကိုယ်ရော အထက်ကလို စိတ်ထားမျိုး တူတူရှိဂျဒါကို ပြောဒါ။ ပေါက်ပီနော် အရပ်ကတို့။ မပေါက်လည်း ပေါက်တယ်လို့ မှတ်ဂျဘာ။
ဘုန်းဘုန်းအံမှာ ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ရန်သူရှိခဲ့တယ်။ သူနဲ့ဂ နှစ်ဖက်ရန်သူ ဖြစ်ခဲ့ဒယ်။ သူလစ်ရင် ကိုယ်က တွယ်ဒယ်။ ကိုယ်လစ်ရင် သူက တွယ်ဒယ်။ ဂလိုနဲ့ ကျင်လည် လာလိုက်ဒါ အသက်တွေ ကြီးတဲ့ထိအောင် ရန်တွေက မစဲခဲ့ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး မရခဲ့ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ် ရမှာဒုံး။ ညှိမှ မညှိခဲ့ဒါ။ ညှိလည်း ခဏဘာဘဲ။ နောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပြန်ဆော်ကြဒါဘဲ။
ဘုန်းဘုန်းအံ တစ်ယောက် အထက်က ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမကို သွားတွေ့မိခဲ့ဒယ်။ အဲ့မှာတင် “သြော် … ရန်ဆိုဒါ ဂလိုပါလား” ဆိုပြီး ပေါက်သွားခဲ့ဒယ်။ ဟိုကောင်ဂဒေါ့ ပေါက်ဘူး။ ဗာလာနံ လူမိုက်ကိုး အရပ်ကတို့ရဲ့။ ဘုန်းဘုန်းအံလည်း အဲ့အဆုံးအမကြောင့် ပေါက်သွားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း သူဂ ရန်စလည်း မသိသလိုပဲ နေခဲ့ဒေါ့ဒယ်။ သူ့ဂို မြင်ရလို့ ဘဝင်မကျ ဒေါမနဿတွေ ဖြစ်ချင်ပြီဆို သူနဲ့ ဝေးရာကို သွားနေလိုက်ဒယ်။ အဲ့လို နေလို့ မရရင်လည်း မျက်စိကို မှိတ်ထားလိုက်ဒယ်။ သူ့အသံကြားရလို့ နားမချမ်းသာဘူး ဖြစ်လာရင်လည်း နားကို ပိတ်ထားလိုက်ဒယ်။ သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဥပေက္ခာ ပြုထားလိုက်ပါဒေါ့ဒယ်။
အဲ့ကောင်ဂဒေါ့ မူပြောင်းမသွားဘူး။ ကျုပ်လစ်ရင် ကျုပ်ကို ဆော်ဒယ်။ ကျုပ်က ပေါက်ထားဒဲ့လူဆိုဒေါ့ မသိကျိုးကျွံဘဲ ပြုထားလိုက်ဒယ်။ ဒါကိုဘဲ ဒီကောင်ဂ အခွင့်ကောင်းယူပြီး ထပ်ဆော်ဒယ်။ သူဘယ်လို ဆော်ဆော် ကျုပ်ကဒေါ့ ဥပေက္ခာပေါ်ကို သည်းခံခြင်း ကိုပါ ထပ်ဖြည့်ထားလိုက်ပါဒေါ့ဒယ်။ အချိုပေါ် သကာလောင်း ဆိုသလိုပေါ့။
ပတ်ဝန်းကျင် အမြင်မှာဒေါ့။ ကျုပ်က ခံဘက်ကပေါ့။ ကျုပ် သည်းခံနေဒါကို မသိဘဲ အမြဲတမ်း ခံဘက်ကပဲ ဆိုပြီး အထင်သေးတဲ့ မျက်လုံးဒွေနဲ့ ကျုပ်ဂို ကြည့်ကြဘာဒယ်။ ဒါပေသိ ကျုပ် မှုပါဘူးလေ။ သူတို့က ကျုပ်လောက်တောင် မပေါက်တဲ့ ပုထုဇဉ်ဒွေပဲ လို့ပဲ ဂရုဏာ ဖြစ်မိပါဒေးဒယ်။
တရားနာ လာဂျဒဲ့ အရပ်ကတို့မှာလည်း အဲ့လို ရန်သူရှိရင် သည်းခံပါ။ ရန်ကို ရန်ချင်း မတုံ့ပြန်ပါနဲ့လို့ ကျုပ်က ပြောချင်ဘာဒယ်။ ရန်ကို ရန်ချင်းတုံ့ပြန်ရင်ဒေါ့ ရန်ဆိုတာ ဘယ်ဒေါ့မှ ငြိမ်းမှာ ဟုတ်ဘူး။ သံသရာအထိပါ ပါလာလိမ့်မယ်။ ကိုယ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ပြုံးပျော်ရပေမယ့် ကိုယ်ခံရတဲ့ အချိန်ကျပြန်တော့ ဒူးနဲ့ မျက်ရည် သုတ်ရတတ်တယ်။ ဒါတွေကို ပေါက်အောင် လုပ်ဂျဘာ။ အဲ့ဂလို ပေါက်တဲ့လူတွေဂဒါ အမှန်တကယ် ပါးနပ်ဂျသူဒွေ ဖြစ်ပါဒယ်။
ကိုင်း … ကိုင်း ..
ကျုပ်တရား နည်းနည်း ရှည်သွားပီ။
တရားဆို တိုမှ … မယားဆို … အဲလေ … ယောင်သွားလို့ … ဘုန်းဘုန်းနဲ့ မယားဆိုတာနဲ့က ဘာမှလည်း ဆိုင်ဘဲနဲ့ …
ကျုပ်တရားပွဲဂို လာရောက်ကြဘာဂုန်ဒေါ အရပ်ကတို့ ကျမ်းမာ၊ ချမ်းသာ၊ ပေါက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဘုန်းဘုန်းအံက ဆုပေးလိုက်ပါဒယ် …
ကျုပ်တရားပွဲ မလာကြသူဒွေဂဒေါ့ …. အဟင်း .. ဟင်း .. ဟွင်း .. ဟွင်း … သိဒယ် မီဟုတ်လား ….
နောင် … ဝေ … ဝေ …… နောင် .. ဝေ … ဝေ …..
တရားပွဲ သိမ်းပီ …
မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ မြောက်မြားစွာဖြင့် …
အမေလေး သိဒယ် သိဒယ်
ကျိန်စာတိုက်မယ်စိုး တရားပွဲ ဝင်ရောက်ရှိကြောင်းပါ ဖုန်းဖုန်းးးးးးးးးးး
တရားတော့ နာပီးတွားဘီ..အချိုရေလေးတိုက်ဖို့ ပဲ ကျန်တော့ဒယ်..ဘယ်မလဲ အချိုရည် ..
ကျုပ်လဲ လေပြေသွေး တရားဟောမလို့ ပါဘဲ
ဒါပေသိ..ဟိုလူတွေက မီးရှို့ ခံရတဲ့အထဲမှာ မင်းအမျိုးမပါတော့ မင်းက လေပြေသွေး တရားဟောနိုင်တယ်လို့ ပြောမှာချိုးလို့ငြိမ်နေဒါ..
တစ်ဂယ်တော့.ဖင်ယားတဲ့ အစွန်းရောက် ရိုဟင်ဂျာတစ်စုကြောင့် ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ကြကုန်သော မြန်မာမွတ်စလင်များပါ
ရောယောင် သိက္ခာချခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်..သတင်းစာမှ သတိလက်လွတ်နဲ့မှားယွင်းစာ ခေါင်းစဉ်တပ်မှုကြောင့်လဲ မှားယွင်းစွာ အထင်မြင်လွဲကုန်ခဲ့ကြတယ်..
ြိငိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ကြကုန်သော မြန်မာမွတ်စလင်အပေါင်းတို့ 
ဆူးလေမှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြကုန်သော ခေါင်းဆောင် အပေါင်းတို့ ..
သင်တို့ အနေဖြင့် အစွန်းရောက် ရိုဟင်ဂျာ ငမိုက်သားများကို ဖီလာဆန့် ကျင်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ကြကုန်လော့
ငမိုက်သားတို့ ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြကုန်သော အပြစ်မဲ့ လူသားများကို စာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် ဖေးမကူညီကြကုန်လော့
အသစ်အသစ်ဝင်လာလတ္တံ့ သော အစွန်းရောက် ခေါ်တောရိုဟင်ဂျာများအား တားဆီး ပိတ်ပင်ကြလော့
သင်တို့ သည် ငြိမ်းချမ်းရေးရှေးရှူသော၊ တရားထိုက်စွာ ခံစားခွင့်ရှိသော လူသားများဖြစ်အောင် အထက်ပါ နည်းများဖြင့် လုပ်ဆောင် ကျင့်ကြံကြကုန်လော့.
အကျွန်ုပ်သည်ကား ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှု၍ အစွန်းရောက်ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖီလာဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဘီအီးလုလင်ပင် ဖြစ်ချေပါသည်။
အဲ့ကိစ္စကြီးကို အမြန်ဆုံး ပြီးပြတ်စေချင်ပြီဗျာ ..
ဒီသတင်းတွေနဲ့ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ် …
သာဓု .. သာဓု .. ကျုပ်ကတော့ ဂေ့လို့ မရသေးဘူး …
ခုထိ မကစ်ရသေးလို့ …
ဟိုအပေါ်က ဘီလူးပြေးသရဲငို ဆိုဒဲ့လူဂျီး ..
ခင်ဗျား တရားပွဲထဲ ထိုင်နေတာတော့ တွေ့ရပီ ..
တရားအတိုင်း ပေါက်အောင်လုပ်ဖို့ ကျန်ဒေးဒယ် ..
တော်ကြာ လာရကျိုး မနပ်အောင် မလုပ်နဲ့ ..
အူးဗိုက်ကြီး က အားရဘီပေါ့နော်
အူးဘဇင်း အံ ရေ
ဆေးကြိမ်လုံးနဲ့ တို့တော့လဲ လာထိုင်ပေးရသပေါ့
လာရကျိုးနပ်ပါပေတယ် မစ္စတာ တုံးရယ် . . .
အသိတရားကင်းမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်မျိုးဖြစ်ပွားရတာဟာ၊ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးထိရောက်မှုမရှိလို့ ထင်တိုင်းကြဲကုန်နိုင်တာလို့ အန်တီထင်မြင်မိပါတယ်။။
ဘုန်းဘုန်းအံ(ခြောက်မျက်နှာ)ရေ…မြတ်စွာဘုရားက လေးသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်း၊ ဒီလို ခန္တီပါရမီနဲ့ အလုံးစုံပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ကျင့်ခဲ့တာပါ။
ကျတော်ဖြင့်…သာမှန်ပုထုဇဉ်ဖြစ်ပြီး လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန်မာနတွေနဲ့ ဆိုတော့ အခုကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရခိုင်မှာရှိရင် ကျတော်တို့ရဲ့သွေးချင်းရခိုင်တွေနဲ့အတူ (မယုံမရှိနဲ့) ဓား ဓားချင်း၊ လှံ လှံချင်း၊ တုတ် တုတ်ချင်း တုံ့ပြန်မိမှာပဲဗျို့။ ကိုယ့်အိုး၊ ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်မြေ၊ ကိုယ့်မိသားစုကို ကာကွယ်ရမှာပဲ။ နောက်ပြီး ဒါဟာတရားပါတယ်။
သာမှန်ပုထုဇဉ်လို ရိုးသားစွာမိုက်မဲ ပြုကျင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးရသတင်းများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ အရာရှိတစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ ရေးသားခဲ့ပါသည်။
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၀၃၀၀ နာရီ။ မင်းဂံရပ်ကွက်(၈/၉)- ဘင်္ဂါလီအင်အား ၂၀၀ ခန့် နှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၂၀၀ ခန့် ရင်ဆိုင်၊ ရဲများ ရောက်ရှိ၊ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်၊ လူစုကွဲ၊ (ရခိုင်အိမ်(၁)လုံးနှင့် ဘင်္ဂါလီအိမ်(၁)လုံး မီးလောင်)
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၀၈၄၅ နာရီ ။ ဘုမေရွာ/မင်းဂံရပ်ကွက်၊ နှစ်ရွာစလုံးရှိ ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂါလီ အချင်းချင်း နေအိမ်များအား အပြန်အလှန် မီးရှို့၊ ရဲများ ရောက်ရှိ၊ မိုးပေါ် ထောင်ပစ်၊ လူစုကွဲ။ (ရခိုင်အိမ်(၂)လုံး၊ ဘင်္ဂါလီအိမ်(၃)လုံး မီးလောင်)
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၀၀၉၅၀ နာရီ ။ မင်းဂံရပ်ကွက်(၁၃)ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းအား ဘင်္ဂါလီ ၁၀ ဦးမှ မီးရှို့၊ ရဲများ ရောက်ရှိ၊ မိုးပေါ် ထောင်ပစ်၊ လူစုကွဲ။ (ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁ ကျောင်း မီးလောင်)
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၀၁၀၄၀ နာရီ ။ မင်းဂံရပ်ကွက်(၁၅)၌ ဘင်္ဂါလီ ၂၀၀/၃၀၀ ဦးမှ မီးရှို့၊ ရဲများ ရောက်ရှိ၊ ခြောက်လှန့်ပစ်၊ လူစုကွဲ။ (ရခိုင်အိမ် ၁ လုံး မီးလောင်)
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၀၁၀၄၅ နာရီ ။ စုမေလက်သမားရွာမှ ဘင်္ဂါလီ ၃၀၀ ဦးမှ ရခိုင်အိမ်(၃)လုံး ဖျက်ဆီးဝ ရဲမှ တား၊ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်၊ ဘင်္ဂါလီ ၁၅၀ ခန့် ကျန်ရှိ။
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၀၁၁၃၀ နာရီ ။ ရွှေရောင်စုံ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ဘင်္ဂါလီ ၂၀၀ ဦးမှ လာဝိုင်း၊ ရဲများမှ ရှင်းလင်းဆဲ။
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၀၁၁၄၀ နာရီ ။ ဒူးဝါးမြောင်ရွာ၊ ဘင်္ဂါလီ ၄၀၀ ဦးနှင့် ရခိုင် ၁၅၀ ဦး ထိပ်တိုက်တွေ့။
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၀၁၁၄၀ နာရီ ။ စစ်တြွေုမို့၊ ပုဏားကျွန်းမှ ရခိုင် ၂၀၀ ဦး စစ်တွေသို့ ထွက်လာ၊ ပုဏားကျွန်းတွင် တားထား။
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၀၁၀၅၀ နာရီ ။ စစ်တွေ ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ရခိုင် ၄ ဦး (မစိုးရိမ်ရ) ဒဏ်ရာဖြင့် ရောက်ရှိလား။
Eleven မှာ တွေ့ တာ..နော်..
အဲဒီတော့ စစ်တွေနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်မှ ညီကိုများ စစ်တွေရှိ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ အိုးအိမ်ခန္ဓာတည်မြဲရေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းကြပါကုန်
အနှီ အစွန်းရောက်ကောင်များသည် ကျနုပ်တို့ လိုမဟုတ်…အခွင့်အရေးရတာနဲ့ အမျှ ကြီးနိုင်ငယ်ညှဉ်းလုပ်တတ်သော မကောင်းသော သောက်ကျင့်ရှိပါသည်…အစိုးရမင်းတို့ အနေနှင့် အစွန်းရောက်ကောင်များကို တည့်တည့်မပစ်ရဲပါက လာရောက်ကူညီသော တိုင်းရင်းသားများကို ခုခံကာကွယ်ရန် လက်နက်များ သယ်ဆောင် အသုံးပြုခွင့် ပေးထားသင့်ပါသည်
ညနေ ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ် အချိန်က စစ်တွေမြို့တောင်ဘက်တွင် ရှိနေသော စစ်တွေဟိုတယ်အနီးမှ စံပြရွာကို ဘင်္ဂါလီများက မီးရှို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ မီးရှို့မှုကြောင့် အိမ်ခြေ တစ်ရာခန့်ရှိသော စံပြရွာရှိ အိမ်အများစုမှာ မီးလောက်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ စံပြရွာသည် စစ်တွေဟိုတယ်နှင့် ပေ ၁၀၀၀ ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။
စစ်တွေဘက်မှာပါ ဆက်သောင်းကျန်းနေကြပါပြီ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ
ပြည်သူ့စစ်တွေဖွဲ့စည်းပေးပြီး ကိုယ့်ပြည်ကိုယ်ရွာကို ကာကွယ်ရမယ့်
တောက်… ၆နာရီကျော်လို့မှ တောက်ကုလားဘင်ဂါလီစုတ်တွေ အပြင်ထွက်လို့ကတော့
ဖင်ကို စတင်းဂန်းနဲ့ကို မွှေပစ်ပလိုက်မယ်…
ကိုအံ့ရေ… သိပ်လည်း တရားဟောမနေနဲ့ဦး… ဘင်ဂါလီတွေက အာပီဂျီတွေကော
သေနတ်နဲ့ပါဆော်နေပြီ။ ဦးရဲကြီးတို့ ကိုစစ်သွေးသစ္စာတို့ သေနတ်ကြီး၊ ဒိုင်ကြီး
တကိုင်ကိုင်လုပ်ပြမနေနဲ့ … နင်တို့ကို ဟိုက RPG အမြောက်နဲ့ ထုသွားလို့
အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ မယားနဲ့ ကလေးတွေ မုဆိုးမဖြစ်ကုန်ဒေါ့မယ်….
ဇွန်၉ရက် ညပိုင်းအထိ မောင် တောတွင် ရိုဟင်ဂျာဘက်မှ အာပီ ဂျေဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ညပိုင်းအထိ သေနတ် အလက် ၈၀ကျော် အစိုးရကရှာဖွေ ဖမ်းမိထားသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
ဘုန်းဘုန်းအံရယ် မိရွှေကြည်အမိုက်မကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ အခုရခိုင်သတင်းတွေဖတ်ပြီးဘယ်လိုမှမပေါက်နိုင်ဘူး
ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ကို အခုအချိန်ထိ သောင်းကျန်းခွင့်ကိုဘယ်သူတွေများပေးထားပါလိမ့်။
စစ်သားတွေဒီလောက်များတာ ဘယ်ရောက်ကုန်တုန်း။ အခုထိသောင်းကျန်းနေနိုင်တာအံ့သြလွန်းလို့
အစိုးရက မထိန်းနိုင်တော့ဘူးလား။ ဦပြောင်ကြီး လုပ်ပါဦး။
ဒီဇာတ်လမ်းကို စခဲ့တဲ့ ခွေးကုလား ထက်ထက် ဆိုတဲ့ကောင်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်း မနက်က ပို့စ် တင်တာ
ကိုရင်မောင်ရေ ဒီမုဒိန်းကောင်သေသွားတာ ထူးထူးဆန်းပါလားဗျာ။
ပုဆိုးတထည်က လူတယောက်သေလောက်အောင် ဟုတ်နိုင်ပေါ့မ
@ကိုအံစာတုံးရေ —–ဟောသမျှတရားပွဲတိုင်းမှာ “သဘော ပါလား”
လို့ အမြဲမေးလေ့ရှိတဲ့ ဆရာတော်ဥူးသုမင်္ဂလကို သတိသွားရပါ၏။
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားသည့်အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်နေမှုကြောင့် ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်မှ စတင်၍ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်၍ ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသည်။
၂။ သို့သော်လည်း ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများမှာ ပိုမိုများပြား ကျယ်ပြန့်လာပြီး ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ရုံဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက် အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ နေနိုင်ရေးကို အမြန်ဆုံးပြန်လည် ဖော်ဆောင်နိုင်ပေးနိုင်စေရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ တော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁၂ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ယနေ့မှစ၍ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေငြာလိုက်သည်။
၃။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိစေရန် တပ်မတော်၏ အကူအညီကို ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။
၄၁၂ ။ (က) တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ ၊ ပြည်နယ်တစ်နယ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေတစ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုတစ်စုတွင်ဖြစ်စေ ၊ ယင်းတို့၏ တစ်စိတ် တစ်ဒေသတွင်ဖြစ်စေ ပြည်သူများ ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ် ကို ထိပါးအန္တရာယ်ပြုမည့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လျှင် သို့မဟုတ် ထိုသို့ ပေါ်ပေါက်ရန် လုံလောက်သော အကြောင်းရှိကြောင်း သိရှိလျှင် သော်လည်းကောင်း ၊ ထိုသို့ပေါ်ပေါက်ရန် လုံလောက်သော အကြောင်းရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဒေသ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်း က တင်ပြလျှင်သော်လည်း ကောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ သည် အမျိုးသားကာကွယ်ရေး နှင့် ညှီနိုင်းပြီး ဥပဒေ ကဲ့သို့ အာဏာတည်သည့် အမိန့် ထုတ်ပြန်၍ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ နိုင်သည်၊
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ နိုင်ငံတော် သမ္မတ သည် အမျိုးသားကာကွယ်ရေး နှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီ နှင့် ညိနှိုင်း ရာတွင် အဖွဲ့ ၀င်များစုံညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက အဖွဲ့ ၀င်များ ဖြစ်သောတပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ၊ ဒုတိယ တပ်တော် ကာကွယ်ရေးဦး စီးချုပ် ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးတို့ နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး အရေးအပေါ် အခြေအနေ ကို အချိန်မီ ထုတ်ပြန်ကြေညာ နိုင်သည်။ ယင်းသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ကို အမျိုးသားကာကွယ်ရေး နှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီသို့ အမြန်ဆုံးတင်ပြ အတည်ပြုချက် ရယူရမယ်။
တရားပွဲတက်သွားပါတယ်နော် ဘုန်းဘုန်းအံ… သူကလည်း မီးစတဖက် ရေမှုတ်တဖက် ဟွန်း..လူဆိုး
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုပါရှင်။
ဒါပေမဲ့ မတရားသဖြင့် အနိုင်ကျင့် နေသူ ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူ့ကို မဆို ဖြစ်တဲ့ နည်း နဲ့ ဆုံးမရမှာဘဲ။
အနုနည်း နဲ့ လူကို အနုနည်း၊
အကြမ်းနည်းသုံးသူ ကို အကြမ်းနည်း။
ကိုယ့်ကို မတရားသဖြင့် အနိုင်ကျင့် သေအောင်လုပ်လာရင် ပြန်ခုခံ။
မတော်လို့ ဒင်းတို့ကို သတ်မိလို့ ငရဲကြီး မယ် ဆိုရင် တမလွန်မှာ ယမမင်းကို ကွန်ပလိမ့် သာလုပ်။
ကွန်ပလိမ့် လုပ်တာ လက်မခံရင် သူ့ကိုလဲ တရားစွဲပစ်လိုက်။
ဘယ်နှစ်မိနစ်ကြာ ဘုန်းဘုန်းဘဝ နဲ့ နေခဲ့လဲ?
ငါ ( အတ္တ ) ရှိ၍ ငါ့ ( အတ္တ ) အကြောင်းဖြစ်လေသည်
( ဤကိုပင် အကြောင်းရှိ၍ အကျိုးဖြစ်သည်မှတ်လေ )
ငါ၏ရန်သူသည် Aကန်စင်စစ် ငါ့ ( အတ္တ ) သည်ဘင်ဖြစ်ဒေါ့သည်ဒဂါး
( မိမိစိတ်၏ ဖေါက်ပြန်ခြင်းကို မြင်အောင်ရှု့ )
ဘုန်းကြီးက“ဟဲ့..အဲဒါကသူများသေတာလေ..ခုဟာက ငါ့အမေဟဲ့..ဟီး ဟီး ဟီး”
အူးစိန်ှဗိုက်ဗိုက်ရဲ့ ရဲတွေကမိုးပေါ်ပဲထောင်ပစ်နေတာလား။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးထဲမှာ ရခိုင် ပဲပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီကုလားမပါဘူး။ ဒါကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကပဲနာတယ်။
ဘုန်းဘုန်းအံ တရားချပေမယ့် တရားမရနိုင်ပါဘူး ဖလာ့။
အပေါ်ကတရားနာပြီး ငြိမ်သလိုလိုရှိတုန်း အောက်ကကွန်မန့်တွေဆက်ဖတ်လိုက်တာ သမာဓိပျက်သွားပြန်ဘီ။ :x စိတ်မရှိပါနဲ့ ဖုန်းဖုန်းဖလား ဘယ်လိုမှမရတော့လို့ထွက်လိုက်ပါအုံးမယ် (ဒေါသ)။